WordPress သို့ Enterprise Analytics ကိုယူဆောင်လာခြင်း Martech Zone
WordPress သို့ Enterprise Analytics ကိုယူလာခြင်း
ကြာသပတေးနေ့, ဇန်နဝါရီလ 14, 2010 သောကြာနေ့, နိုဝင်ဘာလ 2, 2012 Douglas Karr
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လလောက်ကငါဟာအရမ်းကိုပျော်စရာကောင်းတဲ့ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်စီမံကိန်းတစ်ခုကိုလုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ Webtrends သည်ကျွန်ုပ်၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ခဲတစ်ခဲအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်၊ ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းထားများတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အွန်လိုင်းမြင်သာမှုတိုးတက်စေရန်ကူညီခြင်းဖြစ်သည်။ WordPress ကိုအသုံးပြုသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမြောက်အမြားကြောင့် Webtrends သည်ဘက်ပေါင်းစုံသောပူဇော်သကာကိုပေးလိမ့်မည်ဟုအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
Webtrends plugin သည်သင်၏ထည့်သွင်းရန်အတွက်အလွန်သေးငယ်သော plugin တစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ analytics အောက်ခြေကို code ထည့်ပါ။ အဲဒီအစားကျနော်တို့မယုံနိုင်စရာ Webtrends ဆောင်ခဲ့လေ၏ analytics WordPress Dashboard ထဲသို့!
အဆိုပါစီမံကိန်းကိုကစိန်ခေါ်မှုများရှိခဲ့ပါတယ်! Webtrends နေစဉ် API ကို ကျွန်ုပ်အသုံးပြုဖူးသမျှထဲမှာအကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည် (သင်၏ Analytics အက်ပလီကေးရှင်းမှခလုတ်တစ်ခုကိုနှိပ်ရန် API ကို Call!), WordPress နှင့်လိုက်ဖက်သည့်ထူးခြားသောအသုံးပြုသူမျက်နှာပြင်တစ်ခုပေးရန်ကြိုးစားသော်လည်းခက်ခဲသော်လည်းကျွန်တော်၎င်းကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်သည်။ သင်ဖြည့်စွက်မည့် settings စာမျက်နှာရှိတယ် API ကို အသေးစိတ်နှင့်သင်၏အကောင့်ကိုရွေးပါ။ သငျသညျထနှင့်အပြေးနေ!
pageload အချိန်ကိုနိမ့်ကျစွာထားရှိရန်သေချာစေရန် dashboard သည် 100% Ajax မောင်းနှင်မှုဖြစ်သည်။ WordPress 'Ajax လုံခြုံရေးမော်ဒယ်မှတဆင့်အလုပ်လုပ်ရခြင်းသည် ၀ မ်းသာစရာဖြစ်သည် (ထိုတွင်အနည်းငယ်သောစကားလုံးများရှိသော်လည်း၊ ကောင်းသောတစ်ခုရှိရန်လိုအပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်အသိအမှတ်ပြုသည်!) ။
သင်တစ်ဦးဆိုရင် ဝက်ဘ်ဆိုက်များ client နှင့်ကျွန်တော်တို့ကို beta ကိုစမ်းသပ်ချင်ပါတယ်, ငါ့ကိုသိပါစေ။ သင်၏ဆာဗာသည် PHP 5+ ကို cURL library နှင့်အတူဖွင့်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည် API ကို ခေါ်ဆိုမှုများကိုပြန်လည်ရယူနိုင်သည် ကျနော်တို့မှာ plugin အကြောင်းပိုမိုပြောနေတာပါလိမ့်မယ် ၂၀၁၀ ကိုထိတွေ့ဆက်ဆံပါ!
UPDATE: ငါဖော်ပြရန်မေ့လျော့ Ole Laursen အဖြစ်ကောင်းစွာအသင်းကူညီခဲ့သည်။ ငါတို့ကို FLOT နှင့် plugin ကိုစနစ်တကျပေါင်းစပ်ရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။ FLOT open-source တစ်ခုဖြစ်သည် jQuery အခြေခံကြွယ်ဝသော charting အင်ဂျင်။ ငါ Ole ဖော်ပြရန်မေ့လျော့နေပါတယ်! သူနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အံ့သြစရာဖြစ်ခဲ့သည်။
Tags: ။wordpresswordpress plugin ကို
ဇန်နဝါရီ 14, 2010 မှာ 5: 55 AM
Doug - ဒီဟာကြီးလှပါတယ်
အဲဒါကိုရရှိနိုင်လာသောအခါ plugin ကိုကြိုးစားရန်ကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်
14:2010 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 3, 08
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါလု! ဒါဟာပျော်စရာကောင်းတဲ့တစ်ခုပါပဲ ... အဖြစ်အပျက်ကောင်းကောင်းဆက်လုပ်ဖို့အခွင့်အရေးတွေအများကြီး။ Webtrends တွင် API အလွန်ကောင်းပြီး၎င်းကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းကတော့အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတဲ့ဇယားကွက်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်တယ် (သင် mouseover points လုပ်နိုင်တယ်) ။ 😀
ဇန်နဝါရီ 15, 2010 မှာ 3: 26 AM
မယုံနိုင်စရာအလုပ်။ ဒီဒီဇိုင်း / ဖြေရှင်းချက်အလွန်လိမ္မာပါးနပ်သည်။ ဒါကြောင့်ကြိုးစားရန်မစောင့်နိုင်ပါ။
Lisa Isbell ပါ
ဇန်နဝါရီ 21, 2010 မှာ 8: 40 AM
မင်းရဲ့ wordpress plugin ကိုစမ်းကြည့်ချင်ပါတယ် ငါ၌များစွာသောဘလော့ဂ်များရှိသည်။ အသစ်သောအရာတစ်ခုခုကိုအမြဲတမ်းစိတ် ၀ င်စားသည်။ ငါဖောက်သည်တစ်ယောက်မဟုတ်ပေမယ့်သူတို့ရဲ့ဘလော့ဂ်မှာတင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာကိုကြည့်ချင်ရင်ဒီမှာမှတ်ချက်တစ်ခုတင်လိုက်လို့ရတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ ငါ့ကိုသိပါစေ
15:2010 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 5, 28
ငါ ENT လျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီအတွက် webtrends နှင့်ပူးပေါင်းသောအီတလီတွင်ကျွန်ုပ်အလုပ်လုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် beta စမ်းသပ်မှုအဖြစ်လုပ်ကိုင်ရန်စိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်။
Tk Kristiansen ပါ
မတ်လ 1, 2010 မှာ 6: 37 pm တွင်
နင်ကြင်နာမယ်ဆိုရင် plug-in ကိုကြည့်ချင်ပါတယ် ကျွန်ုပ်နှစ်သက်သော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များနှင့် WordPress လည်ပတ်နေသောဖောက်သည်အချို့ရှိပါသည်။ ဒီနေရာကနေ download လုပ်လို့ရလား။
မတ်လ 18, 2010 မှာ 1: 27 AM
ဒီဟာကောင်းတယ် ကျွန်ုပ်တွင် WordTress တွင် WebTrends လိုအပ်သောပရောဂျက်တစ်ခုရှိသည်၊ ဤပလပ်အင်ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်လို့ရသလား။
Adam Ell ပါ
ဧပြီ 14, 2010 မှာ 3: 25 pm တွင်
ဒီဟာကြီးတယ် လူတွေကို beta-test အတွက်စမ်းသပ်နေတုန်းပဲလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏ WordPress MU ထည့်သွင်းမှုကိုစမ်းသပ်လိုပါသည်။
ဧပြီ 20, 2010 မှာ 3: 56 AM
အဆိုပါပေါင်းစည်းမှုအလွန်အလားအလာရှာဖွေနေသည်။ ငါတို့ (ramboll.com တွင်) သည်၎င်းကိုစမ်းသပ်နိုင်ခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် Firewall အတွင်း၌သာဘလော့ဂ်များရှိသည်၊ သို့သော်နှစ်ပတ်အတွင်းပြင်ပဘလော့ဂ်များကိုစတင်ထုတ်လွှင့်သည်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ download လုပ်နိုင်သည့်နေရာတစ်နေရာရှိပါသလား။ သို့မဟုတ်သင်နောက်ဆုံး version ကိုထုတ်ရန်နီးစပ်ပါသလား။
ဇွန် 19, 2010 မှာ 3: 02 pm တွင်
ဒါကောင်းတယ် ငါ beta ကိုစမ်းသပ်ချင်ပါတယ် ငါ webtrends နှင့်အတူခြေရာခံကြောင်းအများအပြားက်ဘ်ဆိုက်များရှိသည်။
ဇွန် 17, 2011 မှာ 12: 22 pm တွင်
ဇွန် 27, 2012 မှာ 4: 48 pm တွင်
မင်္ဂလာပါ Doug - ခင်ဗျားရဲ့ plugin ကိုငါစိတ်ဝင်စားတယ် ဒီဟာကိုသင်ဖွံ့ဖြိုးဆဲလား။ ၎င်းသည် WordPress plugin repository တွင်ရှိပါသလား။ ဤဆောင်းပါးသည်ရက်စွဲမရှိသောကြောင့်လက်ရှိအခြေအနေကိုပြောပြရန်ခဲယဉ်းသော်လည်း၊ ဤသည်မှာသင်ဆက်လက်ထောက်ပံ့နေဆဲဖြစ်သောလက်ရှိ plugin တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ မည်သည့်အချက်အလက်မဆိုအကူအညီတောင်းသည် - ကြိုတင်မဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
စက်တင်ဘာ 18, 2015 မှာ 10: 52 AM
ဟဲလ်, သငျသညျလတ်တလောမှတ်ချက်ခဲ့ကြသည်သတိပြုမိသည်။ ဒီပလပ်အင်နှင့် ပတ်သတ်၍ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုသင်ရရှိနိုင်ပါသလား။
စက်တင်ဘာ 18, 2015 မှာ 10: 51 AM
Doug, ဒီပလပ်အင်တွင်မွမ်းမံမှုများရှိပါသလား။ ကျနော်တို့အလားတူတစ်ခုခုဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်စဉ်၌ရှိကြ၏, သင်ကလူသိရှင်ကြားသို့မဟုတ်ရောင်းချရန်အတွက်ပင်လျှင်ကမ်းလှမ်းခြင်းရှိမရှိမသိရပါဘူး။
18:2015 pm တွင်စက်တင်ဘာ 12, 38 မှာ
အကယ်၍ သင်သည် WordPress တီထွင်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပါကသင့်အားစာရေးသူတစ် ဦး အဖြစ်ထည့်သွင်းပြီးသင့်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးချင်တာကိုရိုးရိုးသားသားပြောချင်ပါတယ်။